मिल्ने भयो काँग्रेसको बिबाद -देउबा शक्तिशाली बन्दै!::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मिल्ने भयो काँग्रेसको बिबाद -देउबा शक्तिशाली बन्दै!
काठमाण्डौ– नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले उग्ररुप लिइरहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवालाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले विभिन्न अड्चन र बाधाव्यवधानहरू दिइरहेको छ । पौडेल समूह आफैमा पनि एकजुट हुन सकेको छैन । यसको फाइदा देउवा समूहले लिइरहेको छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले निर्वाचनमा भएको हारको जिम्मेवारी सभापति देउवाले लिनुपर्ने र अर्ली महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग जोडतोडले राख्दै आएका छन् । तर, पौडेलले यो मागलाई उठाए पनि देउवाले हारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषय भने मत्थर बनाउँदै लगेका छन् । यसबाट देउवा समूहलाई राहत मिलेको छ । देउवा पनि पौडेल समूहलाई विभाजन र थकाएर जाने पक्षमा रहेको एक नेताले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादलाई रामचन्द्र पौडेल समूह उछालिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘निर्वाचनको हारको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्छ भन्ने माग उहाँहरूले छाडिसक्नुभएको छ । अर्ली महाधिवेशनको कुरा उठाउनु भएको छ ।’ उपसभापति निधिले पौडेल समूहको मागअनुसार अर्ली महाधिवेशन गर्न विधानले नदिने बताए ।
सभापति देउवा समूह पौडेलको मागअनुसार अगाडि बढ्ने पक्षमा छैन । विधानलाई बाधक देखाएर देउवाले पूरा अवधि सभापति पदमा रहने संकेत दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसभित्र पौडेल समूह बखेडा गरेर मात्रै बस्न चाहेको आरोप छ । देउवा समूह पौडेलको मागलाई कुनै पनि हालतमा पूरा गर्ने पक्षमा नरहेको संकेत दिएको छ । निधिले कांग्रेसलाई संघीय संरचना र संविधानअनुसार सांगठनिक रुपमा परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने बताउँछन् ।
‘संगठनलाई संघीय संरचनाअनुसार लैजानेबारेमा सबैले जोड दिनुपर्छ’, उनले भन, ‘पहिला संगठन गरौँ । त्यसपछि पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर एक भइ जाऔँ ।’
उपसभापति निधिले कांग्रेस आन्तरिक रुपमा मिल्ने हो भने कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन कसैल नसक्ने बताए । उनले भने, ‘कांग्रेसलाई कम्यनिस्टहरूले कुनै पनि क्षति गर्न सक्दैनन् । तर, हामी पहिला मिल्नुपर्छ ।’
पौडेल समूहमा रहेको भनिएका महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, डा.मीनेन्द्र रिजाल, डा.नारायण खड्कासहितका नेताहरूले देउवालाई अघोषित रुपमा सहयोग गरेको आरोप छ । महामन्त्री डा.कोइरालाले पौडेल समूहलाई असहयोग गरेको आरोपहरू बेलाबेला लाग्ने गरेको छ । पौडेल समूहलाई प्रकाशमान सिंह, डा.रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसीसहितका सीमित नेताहरूको सहयोग छ । अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नै अलग गुट चलाएका छन् ।
सिटौलाले पौडेललाई सहयोग गरे पनि उनको पनि खासै विश्वास छैन भन्नेहरू छन् । हुन त कांग्रेसलाई विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । फोरम लोकतान्त्रिकका धुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नेता योगेन्द्र चौधरीले छिटोभन्दा छिटो फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सभापति देउवाले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘हामी कांग्रेसमा आइसकेपछि लामो समयदेखि भूमिका विहीन भएर बसेका छौँ’, उनले भने, ‘विधानमा समस्या छ भने बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि ठोस निर्णय लिनुपर्छ ।’